बलिउडका ७ ‘स्टार’ : जसले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन् आफ्नो ‘पहिलो प्रेम’
एजेन्सी । माया गहिरो र खुशीको आभाष हो । जब कसैसँग माया बस्छ अनि नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हुन्छ तब हरेक कुरा सकारात्मक र सहि लाग्छ ।
तर सम्बन्ध अगाडि बढ्दै जादाँ विस्तारै एक–अर्काको कमजोरी थाहा हुँदै जान्छ र सम्बन्धमा तित्तता पैदा हुन्छ । यस्तै बलिउडका केहि चर्चित स्टारको जीवनमा पनि लागू भएको छ । पहिलो पटक प्रेममा असफल केहि अभिनेता तथा अभिनेत्री आजसम्म पनि पहिलो प्रेमलाई भुल्न सकेका छैनन् ।
बलिउडमा निकै ठूलो स्थान बनाइसकेका यी केहि चर्चित अभिनेता तथा अभिनेत्रीको पहिलो प्रेम को थियो त ? र किन उनीहरुको सम्बन्धमा तित्तता आयो त ?
दीपिका पादुकोण र निहार पाण्डे
बलिउडमा आएको केहि समयमा नै दीपिका पादुकोण निहार पाण्डेसँग प्रेममा परेकी थिइन् । निहार पनि अभिनेता तथा मोडल थिए । तर दीपिका पादुकोण शाहरुख खानसँग ‘ओम शान्ति ओम’ फिल्म खेलेपछि निकै चर्चित भइन् तर निहार अझै पनि बलिउडमा आफ्नो स्थान बनाउन प्रयासरत रहेका छन् ।
प्रियंका चोपडा र हरमन बवेजा
बलिउडका ऋतिक रोशन जस्तै देखिने हरमन बवेजाले ‘लव स्टोरी २०५०’ फिल्मबाट करियरको सुरुवात गरेका थिए । यो फिल्म बक्सअफिसमा सुपर फ्लप भयो । यसैबीचमा प्रियंका र हरमनकोबीचमा प्रेम पलाएको थियो । तर हरमनको दुईवटा फ्लप फिल्मपछि यी दुईको ब्रेकअफ भयो ।
करीना कपूर र ऋतिक रोशन
‘कभी खुशी कभी गम’ फिल्मको शुटिङको क्रममा करीना र ऋतिक रोशनको प्रेम सम्बन्धको सुरुवात भएको थियो । दुवैले सम्बन्धलाई लिएर कहिल्यै पनि कुनै आधिकारिक धारणा व्यक्त नगरेको भएपनि यिनीहरुको प्रेमसम्बन्ध निकै लामो समयसम्म चलेको थियो । विवाहित ऋतिकसँग करीनाको पहिलो प्रेम टिकेन र अन्त्यमा ब्रेकअप भयो ।
ज्याकलीन फर्नान्डीज र हसन बिन राशिद अल खलीफा
श्रीलंकाकी सुन्दरी ज्याकलीनको बहरीनका राजकुमार हसन बिन राशिद अल खलीफासँग गहिरो प्रेममा थिइन् तर पछि उनको सम्बन्ध निर्देशक साजिदसँग भएको हल्ला फैलियो र उनीहरुको सम्बन्धको अन्त्य भयो ।
अर्जुन कपूर र अर्पिता खान
बलिउडमा डेब्यू गर्नुभन्दा पहिले अर्जुन कपूर सलमान खानकी बहिनी अर्पिता खानसँग प्रेममा थिए । उनले आफ्नो पहिलो र अन्तिम माया नै अर्पिता हुन् भन्ने अर्जुनले बलिउडमा डेब्यू गरेपछि अर्पिताको बिहे भयो र उनीहरुको ब्रेकअप भयो ।
अनुष्का शर्मा र जोन्हेब युसूफ
अनुष्का शर्मा र युसूफले पहिलो भेटमै एक अर्कालाई मन पराएका थिए । र प्रेम सम्बन्धमा पनि थिए । अनुष्काले यशराज फिल्म ब्यानरमा काम पाइन् भने युसूफ भने बेन्गलुरु फर्किए । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा फूलस्टप लाग्यो ।
कंगना रनौत र आदित्य पंचोली
बलिउडको सुरुवातमा कंगनाको प्रेम आदित्य पंचोलीसँग रहेको थियो । पंचोली विवाहित र कंगना भन्दा २० वर्ष जेठा थिए । उनीहरुको सम्बन्धले निकै चर्चा पायो तर उनीहरुको सम्बन्धको अन्त्य निकै विवादास्पद रह्यो ।